Izinhlelo Zokusebenza Zamaselula: Kungani Kufanele Wakhe, Yini Ongayakha, Ungayithuthukisa Kanjani | Martech Zone
Izinhlelo Zokusebenza Zamaselula: Kungani Kufanele Wakhe, Yini Ongayakha, Ungayithuthukisa Kanjani
ULwesihlanu, July 24, 2015 NgoLwesine, July 23, 2015 Douglas Karr
Sibonile amabhizinisi ephumelela ngezinhlelo zokusebenza zeselula namanye amabhizinisi elwa kanzima. Okuyinhloko empumelelweni enkulu kwakuyinani noma ukuzijabulisa uhlelo lokusebenza lweselula olulethe ukuhola noma ikhasimende. Okumqoka kuzinhlelo zokusebenza ezinzima bekungumuzwa omubi womsebenzisi, ukuthengisa ngokweqile, ngenani elincane kakhulu kumsebenzisi. Siphinde sabona izinhlelo zokusebenza zeselula ezinhle kakhulu ezakhiwe kepha ezingazange zamukelwe ngenxa yemizamo ebuthakathaka yokuphromotha.
Ukuthuthukiswa kwesicelo samaselula kuyaqhubeka ukwehla ngentengo njengoba izinkampani eziningi ngokwengeziwe zakha ngempumelelo izinhlaka nezinkundla zokusebenza zohlelo lokusebenza lweselula. Lokho empeleni kungenise izinkinga eziningi embonini kusukela manje wonke umuntu ushicilela izinhlelo zokusebenza. Inkinga ukuthi ayichithwanga imali eyanele ekuhlolweni komsebenzisi, isipiliyoni somsebenzisi nokuphakanyiswa… okwenza noma kwephule impumelelo yohlelo lokusebenza lweselula.
Kusengumsebenzi ofanele ukutshala imali kuwo, kufanele uthole abalingani abafanele. Izinhlelo zokusebenza zeselula zingathuthukisa ukuthembeka kwebhizinisi futhi zikhulise ukuthengisa kwakho. Njengesibonelo, sakhe uhlelo olulula lokuguqula inkampani yamakhemikhali esize amaklayenti abo ukwenza izibalo eziqondile zokuguqulwa ngaphandle kokubuyela emuva kudeskithophu yabo. Futhi-ke, uhlelo lokusebenza lwalunokuchofoza ukuze ushayele ucingo okwabanika amandla okuvele bashayele iklayenti lethu usizo noma ukwenza i-oda.
U-18% wabathengisi abaphezulu abangama-500 e-UK nangaphezulu kwama-50% e-US banikeza amakhasimende uhlelo lokusebenza lokuthengiselana. Njengoba uhhafu wabasebenzisi beselula abaphendukela kuzinhlelo zokusebenza ukwenza izinqumo zokuthenga, ama-brand kumele athathe isikhathi sokufunda izidingo zomthengi futhi adale umuzwa wohlelo lokusebenza ohlangabezana ngqo nezidingo zamakhasimende. Kepha ngaphambi kokwethula uhlelo lwakho lokusebenza olukhulu olulandelayo, kunamaphuzu abalulekile okufanele uwagcine engqondweni.
Ukuthatha okubalulekile kusuka ku-infographic yakamuva ye-Usablenet:
Ingxenye eyodwa kwezintathu zabasebenzisi bohlelo lokusebenza lweselula bakhipha izinhlelo zokusebenza ngoba balahlekelwe yintshisekelo
U-30% wabasebenzisi bohlelo lokusebenza lweselula bangaphinda basebenzise uhlelo lokusebenza uma lunikeza isaphulelo
Ama-2 / 3rds wabasebenzisi bemidiya ephathekayo emhlabeni wonke abheka ukuveza obala kubaluleke kakhulu
Ama-54% wezinkulungwane zeminyaka emhlabeni jikelele athi ulwazi olubi lweselula luzokwenza kube lula ngabo ukusebenzisa eminye imikhiqizo yebhizinisi.
Funda kabanzi mayelana nokuklama isu elilungile lohlelo lokusebenza lweselula ku-Usablenet mahhala Umhlahlandlela wezinhlelo zokusebenza zeselula.
Tags: uhlelo lokusebenza lweselulaukwamukelwa kohlelo lokusebenza lweselulaisipiliyoni sohlelo lokusebenza lweselulaukusetshenziswa kohlelo lokusebenza lweselulaukusetshenziswa kohlelo lokusebenza lweselula
Iyini Inkomfa Ebuthakathaka Ekulahlekisela?
Ukhiye Wokutholwa Kokulawula Komkhiqizo Wakho Ukwenza kube ngokwakho